दलिया तपाईं चाँडै सम्पूर्ण परिवारको लागि एक स्वस्थ र स्वादिष्ट नाश्ता तयार गर्न आवश्यक जब बेबदल। यस लेखमा तपाईं पोषण मूल्य एक "हर्कुलेसक्लस्टर", यसको ताप र उपयोगी गुण छ के सिक्न हुनेछ।
ऊर्जा र पोषण मूल्य
दलिया - एकदम उच्च क्यालोरी को एक उत्पादन। 100 ग्राम सुक्खा "हर्कुलेसक्लस्टर" - 300 भन्दा बढी क्यालोरी छ! प्रोटिनको 6.1 ग्राम - - 11 ग्राम यो उत्पादनमा कार्बोहाइड्रेट बोसो को बारेमा 50 ग्राम को राशि समावेश गर्दछ। उच्च खाद्य र ऊर्जा मूल्य दलिया को साधारण प्रश्न छैन। त्यसैले उच्च ताप सक्षम लामो भोक पूरा छ "हर्कुलेसक्लस्टर"। यसलाई नास्ता लागि खान राम्रो छ किन कि छ।
दलिया खाना पकाउनु नडराऊ, डर चाँडै कारण तिनीहरूले धेरै क्यालोरी समावेश भन्ने तथ्यलाई गर्न वजन बढाउनका र आफ्नो आकारहरू बिगार्छ। वास्तवमा, उम्लिरहेको वा दलिया क्यालोरी खाना खाने उमालेको पछि तल छ। निस्सन्देह, यो चीनी र घिउ थपियो छैन जो पानी, मा दलिया दुबला लागू हुन्छ। को "हर्कुलेसक्लस्टर" दूध संग पकाएको छ भने, त्यसपछि क्यालोरी समाप्त उत्पादन दूध बोसो सामग्री प्रयोग को डिग्री प्रभावित हुनेछ। थप पोसिलो porridge इच्छा र यदि यो पागल, सुकेको फल वा ताजा फल र तरकारी, मह जोडी गरिनेछ। नास्ता, भोजन वा खाने को लागि: "हर्कुलेसक्लस्टर" कुनै पनि समयमा खाएको गर्न सकिन्छ (क्यालोरी ड्राई अनाज बारेमा 350 प्रति 100 ग्राम किलो कैलोरी)। किनभने तपाईं कम पौष्टिक खाना खान आवश्यक दिनको समय मा, पानी मा - बिहान वा दिउँसो खाना पकाउन र दूध संग porridge खान सबै भन्दा राम्रो छ, त्यसैले यसलाई अझ राम्रो Fed हुनेछ, र साँझ।
विभिन्न micronutrients, भिटामिन र खनिज को दलिया मा धेरै। निस्सन्देह, यी उपयोगी पदार्थ केही unavoidably "हर्कुलेसक्लस्टर" को उत्पादन समयमा, सिधा अनाज देखि हराएको र धमाकेदार। यो विधि को लाभ को गुच्छे अन्तमा चाँडै तयार छन् भन्ने हो। त्यसैले समाप्त उत्पादन को गुणवत्ता र स्वाद गुण को हानि बिना आफ्नो समय बचत गर्नुहोस्।
तपाईं, फलाम, fluoride, क्याल्सियम, आयोडिन, भिटामिन मा धनी एक अनाज किन्न "हर्कुलेसक्लस्टर" किन्न चाहनुहुन्छ भने, Boiling आवश्यक छ।
पानी मा क्यालोरी दलिया
porridge को तयारी को विधि मात्र होइन यसको पोषण र ताप मूल्य निर्भर हुनेछ, तर पनि आफ्नो शरीर लागि लाभ। उदाहरणका लागि, तपाईं घिउ र चिनी बिना पानी मा दुबला porridge पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा समाप्त दलिया को 100 ग्राम, लगभग 80-90 किलो कैलोरी हुनेछ। तपाईं स्वादिष्ट र appetizing जस्तो छैन यस्तो सरल porridge छन् भने, चीनी र घिउ थप्न। निस्सन्देह, पकवान यी उत्पादनहरु थपेर थप पौष्टिक हुनेछ।
अन "हर्कुलेसक्लस्टर" पानी (क्यालोरी तयार भोजन रूपमा दूध प्रयोग गर्दा उच्च छैन) सधैं बाहिर धेरै स्वादिष्ट उत्तेजित गर्दछ!
दूध संग क्यालोरी दलिया
आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह वा वजन, एक समाप्त पकवान को खाना र ऊर्जा मूल्य गणना को समस्या परिचित गुमाउन चाहने मानिसहरू। पक्कै पनि, यो खातामा उत्पादन को ताप मूल्य लिन महत्त्वपूर्ण छ। यो हरेक दिन एक स्वस्थ व्यक्ति कम्तिमा 2,000 किलो कैलोरी उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञात छ, र एक आहार बसिरहेका मानिसहरू, तपाईं मात्र 1,200 क्यालोरी आवश्यक छ। र ती र अरूलाई सन्तुलित तरिका खान महत्त्वपूर्ण छ। यो एक लामो समय को लागि पकाएको खाना saturate महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हार्दिक र स्वस्थ पकवान दलिया छ। यस मा "हर्कुलेसक्लस्टर" दूध (को गरमी सामाग्री नास्ता लागि गर्न उपयोगी छ अनाज को प्रति सय ग्राम 113-130 किलो कैलोरी)।
दलिया खाने द्वारा कति क्यालोरी प्राप्त गर्न सकिन्छ?
तपाईं खाना र ऊर्जा मूल्य को प्रकारको के पकाएको गरिनेछ दलिया सोचिरहनुभएको, लामो गणना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं निम्न सूची प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
ड्राई गुच्छे - 352 किलो कैलोरी;
दूध संग Porridge - 113-130 किलो कैलोरी;
पानी, क्यालोरी मा "हर्कुलेसक्लस्टर" - 80-90 किलो कैलोरी;
अनाज दूध र घिउ - 150 किलो कैलोरी;
चिनी संग दूध - 165 किलो कैलोरी;
चिनी संग पानी - 125 किलो कैलोरी;
दूध, चीनी र तेल - 200 किलो कैलोरी;
बारेमा 165 किलो कैलोरी - को मक्खन र चिनी संग पानी मा।
ताप उत्पादन 100 ग्राम मा प्रतिनिधित्व।
क्यालोरी विभिन्न additives संग "हर्कुलेसक्लस्टर"
केही मानिसहरू दलिया को स्वाद केहि नीरस र अनिच्छुक देखिन्छ पाउन। तपाईं यो राय लीन भने, केही थप सामाग्री जोडने, सामान्य व्यञ्जनहरु porridge विविधता गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसैले, मह क्यालोरी को कम्पनी मा herculean porridge दूध संग बारे 130 किलो कैलोरी हुनेछ। किसमिस अत्यन्तै स्वादिष्ट दलिया। घिउ र चिनी थपेर एक दूध सम्भव हलुआ तयार। यो embodiment मा, 170 किलो कैलोरी वरिपरि क्यालोरी कार्यान्वयन। एक स्वादिष्ट मिठाई porridge कुनै जोडी चीनी हुन सक्छ तयार। बरु, यो एक थप उपयोगी कद्दू लिन राम्रो छ। "हर्कुलेसक्लस्टर" को यो प्रदर्शन अपवाद बिना सबै अपील गर्नेछ (प्रति 100 ग्राम गरमी सामाग्री एउटा सानो नम्बर हुनेछ)।
के ताप निर्धारण
समाप्त पकवान को ऊर्जा मूल्य धेरै कारक निर्भर हुनेछ:
गुच्छे को उत्पादन मा के प्रविधि प्रयोग गरिएको छ।
दूध वा पानी अनाज पकाएको छ। पकाएको दलिया थियो जो तरल आधारमा, पकवान थप वा कम क्यालोरी हुनेछ। निस्सन्देह, दूध को अनाज को ऊर्जा मूल्य बढ्छ।
कुनै पनि अतिरिक्त सामाग्री उत्पादन को पोषण मूल्य बृद्धि।
यो रोचक छ
जई भोजन ग्रीक पौराणिक कथाहरु को नायक को सम्मान मा यसको नाम पायो। मानिस उहाँलाई अविश्वसनीय साहसिक कार्य प्रदर्शन मदत एउटा अचम्मको शक्ति थियो। यसलाई त्यसैले खान अनाज "हर्कुलेसक्लस्टर" समय समयमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। उत्पादन को ताप मूल्य अन्न प्रशोधन को विधि मा निर्भर गर्दछ। दलिया खाने र आफ्नो जीवनको आनन्द!
BRIE - पनीरों र राजाहरूको पनीर राजा। सेतो मोल्ड BRIE संग फ्रान्सेली पनीर
मकै "Kuzma" बच्चाहरु र वयस्क लागि sticks
मधुमेह मा, फल आहार मा Unsweetened। फल को चीनी सामाग्री: तालिका सूची
हरर के हो? पीसी मा हरर खेल विधा
महिला पिकअप को रहस्य: कसरी सडक मा एक मान्छे थाह गर्न
को जीवमण्डल Name को सिद्धान्त: स्रोतहरू
एक gothic उपन्यास के हो? आधुनिक गोथिक उपन्यास
"बेपत्ता": फिलिम को समीक्षा र आलोचकहरु
जेरक्स 3325: विनिर्देशों, निर्देशन, समीक्षा
विद्यार्थी ऋण (Sberbank): समीक्षा